Oku njem ụgbọ mmiri ọhụrụ na Ọdụ ụgbọ mmiri Falmouth mere eme kemgbe COVID-19
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ gbasara Jamaica » Oku njem ụgbọ mmiri ọhụrụ na Ọdụ ụgbọ mmiri Falmouth mere eme kemgbe COVID-19
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Ịtụ egwu • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Akụkọ gbasara Jamaica • News • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Port Authority of Jamaica (PAJ) na ndị mmekọ ya na-aga n'ihu na-akwado ịmalitegharị ọrụ mbufe ụgbọ mmiri site na Port Falmouth Historic meghere na Sọnde, Nọvemba 14, 2021 mgbe ọ nabatara Emerald Princess, ụgbọ mmiri mbụ ga-aga n'ọdụ ụgbọ mmiri kemgbe nkwusioru ahụ. arụ ọrụ n'ihi ọrịa COVID-19.
Oku a dabara nke ọma na mbọ PAJ na-eme iji nke nta nke nta meghee ọdụ ụgbọ mmiri ya n'agwaetiti niile n'ime ọnọdụ ọrụ ọhụrụ.
A ga-eduzi nke a site na ụkpụrụ siri ike yana dabere na ntuziaka ahụike na nchekwa nke Ministry of Health and Wellness (MoHW) hibere.
Atụmatụ ịmalitegharị ọrụ ịrị elu, otu ọdụ ụgbọ mmiri n'otu oge amịpụtala mkpụrụ.
Port nke Ocho Rios na Errol Flynn Marina dị na Port Antonio nwetara ụgbọ mmiri mbụ ha kemgbe nkwusioru n'August na Nọvemba n'otu n'otu na nke ọ bụla mepekwara nke ọma. Ụdị ịmachi ndị njem n'ụgbọ mmiri n'ebe nkiri dị iche iche yana n'ime njegharị a na-achịkwa nke MoHW na Ụlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Nleta Nleta (TPDCo) na-arụ ọrụ nke ọma na a ga-emejuputa ya n'ọdụ ụgbọ mmiri niile. Isi ihe a na-elekwasị anya n'ụdị a bụ igbochi mmekọrịta ya na ndị obodo iji hụ na nchekwa ụmụ amaala obodo na-adịgide adịgide nke bụ ihe kacha mkpa na ibelata ihe egwu nke mgbasa nke COVID-19.
Princess Emerald ga-akpọ ndị ọbịa 1,719 na ndị ọrụ ụgbọ mmiri 1,061. Emebela ndokwa maka ndị njem ụgbọ mmiri ka ha gaa na ahịa nka dị n'obodo Falmouth yana nleta na ebe nkiri akwadoro gụnyere Dolphin Cove, Dunn's River Falls na Chukka na mgbakwunye na nsonye na njem ndị ọzọ a na-achịkwa.
Prọfesọ Gordon Shirley, Onye isi ala & Onye isi ala, PAJ gosipụtara obi ụtọ ya na mmalite usoro azụmaahịa nke Cruise Shipping, nke bụ otu n'ime ndị PAJ na-enweta ego kacha mkpa, ma na-atụ anya imeghe ọdụ ụgbọ mmiri niile. O kwuru na "PAJ na-anabata mmasị siri ike na Ebe Jamaica ndị na-anụ ọkụ n'obi n'ụgbọ mmiri n'ụwa niile egosipụtara, nke gosipụtara site na nsonye nke ọdụ ụgbọ mmiri anyị na njem nke ọdụ ụgbọ mmiri ndị bụ isi n'agbanyeghị usoro ọrụ ụgbọ mmiri COVID-19 ọhụrụ yana dị ka a hụrụ ya na ihe nrite anyị na-adịbeghị anya sitere na World Travel Awards na United Kingdom. Ihe nrite Wave Ọ gara n'ihu kwuo na "enwere nnukwu uru a ga-enweta site na onye mmeri njem ụgbọ mmiri dị ka Jamaica na anyị (PAJ) nwere olile anya karịa na n'ihi ntinye ego nke nzukọ a mebere na akụrụngwa ụgbọ mmiri n'afọ a, oku maka oge nke afọ na-abịa ga-akarị nke akwadoro maka afọ a."
N'ịnabata nlọghachi nke ụgbọ mmiri na Falmouth, Minista njem nlegharị anya Hon. Edmund Bartlett kwuru, sị: "Nlaghachi nke ọrụ ụgbọ mmiri na Port Port of Falmouth mere ihe dị mkpa bụ nzọụkwụ dị mkpa na nhazigharị nke ngalaba njem nlegharị anya na ọ ga-ekere òkè dị ukwuu na mgbake nke ụlọ ọrụ ahụ n'ozuzu yana site na ịgbatị akụ na ụba buru ibu, site na mmetụta nke ọrịa ọrịa COVID-19. Ọtụtụ ndị egwuregwu na Falmouth na mpaghara ndị gbara ya gburugburu ga-erite uru n'ihi na ọ ga-eme ka ọtụtụ ndị Jamaica na-adabere na njem nlegharị anya n'ụgbọ mmiri na-eweghachi ọrụ ha chọrọ nke ọma. "
"Nlaghachi nke mbupu ụgbọ mmiri na Falmouth bụ ihe akaebe ọzọ maka mmụba na-arịwanye elu maka Ebe Jamaica. Ngalaba njem nlegharị anya na-agbake nke ọma ma dabere na amụma dị ugbu a anyị na-atụ anya ịnabata ụfọdụ ndị njem ụgbọ mmiri 75,000 n'etiti Nọvemba na Disemba 2021, "Minista ahụ kwuru. "Ọ ga-amasị m ịja ndị niile metụtara ya rụkọọ ọrụ ọnụ iji mee ka nke a kwe omume gụnyere Port Authority of Jamaica, Ministry of Tourism na ọha ọha yana Ministry of Health and Wellness," Minista Bartlett kwupụtara.
O kwuru na emebela ndokwa iji hụ na a na-agbasosi usoro iwu COVID-19 nke MoHW, US Center for Disease Control (CDC) na ndị mmekọ mba ụwa ndị ọzọ hiwere maka ịlaghachi n'udo n'ọrụ ụgbọ mmiri, na-agbakwụnye na n'ihi ihe egwu dị na ya. COVID-19, a ga-eme usoro iji jikwaa mmegharị nke ndị njem ụgbọ mmiri.
William Tatham, osote onye isi ala, ụgbọ mmiri ụgbọ mmiri & Operations Marina, PAJ kwuru na "Enwere m obi ụtọ na ọganihu nke ọrụ ụgbọ mmiri PAJ na-amaliteghachi, enwere m obi ike na anyị ga-ebuga ahụmahụ njem ụgbọ mmiri na-akwụghachi ụgwọ na Falmouth, dị nnọọ ka anyị. emeela na Ocho Rios & Port Antonio." Ọ gbakwụnyere na "oku a na Falmouth bụ nzọụkwụ ọzọ maka ịlaghachi azụ na ọrụ ụgbọ mmiri, ka anyị na-emepekwa otu ọdụ ụgbọ mmiri n'otu oge. Anyị na MoHW na TPCo na-arụkọ ọrụ ọnụ iji hụ na nchekwa nke ndị njem na ndị obodo na oku ọ bụla na-aga nke ọma na-eduga na oku ndị ọzọ na ohere ohere. Obi siri anyị ike na ụgbọ mmiri ga-agbake nke ọma site na nkeji nke abụọ nke afọ na-abịa. "
PAJ na MoHW na-arụkọ ọrụ ọnụ yana Ministry of Tourism na ndị ọhaneze ahọpụtara, gụnyere TPDCo na Jamaica Vacations Ltd (JAMVAC) iji hụ na nloghachi dị mma na nchekwa na ọrụ ụgbọ mmiri n'ọdụ ụgbọ mmiri niile iji mee ka ịmalitegharịa izugbe. na mbido Disemba 2021.